मेवाको बियाँमा मह मिसाएर खानुहोस्, हुनेछन् यी ७ अपत्यारिला फाइदा
एजेन्सी चैत १३ – प्राकृतिक औषधीको फाइदा र त्यसले स्वास्थ्यलाई पुर्याउने लाभ बुझेर आजकाल मानिसहरु प्रकृतिमा पाइने वस्तुप्रति आकर्षित हुन थालेका छन् । यसै सन्दर्भमा आज हामी तपाईंलाई एउटा यस्तो औषधीय गुणबारे जानकारी दिँदै छौं जसबारे हामीलाई पहिले थाहा थिएन । हामीमध्ये धेरैले मेवा त खाएका नै छौं । मेवा खाँदा यसभित्र हुने बियाँ त [&h..
विश्व क्षयरोग दिवस : नेपालमा ३२ हजार क्षय रोगीको पहिचान, लुकेर बसेकाको उपचारमा चुनौति
काठमाडौ, चैत ११ – नेपालमा ३२ हजार भन्दा बढि क्षय रोगी भएको पाइएको छ । त्यसमध्ये ..
कपालको चाया हटाउने ३ तरिका
सुनिता विष्ट, श्रीयुक्ति ब्युटिपार्लर, पुरानो बानेश्वर कपालमा चाया पर्ने गुनासो ..
यो हो मुख स्वस्थ राख्ने तरिका
डा. सुवास घिमिरे ओम समाज डेन्टल हस्पिटल विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस नेपालमा पनि भव्..
जिब्रो पोल्यो ? यसो गर्नुहोस्
कहिलेकाहीँ आफ्नो गल्तीले चिया, कफी पिउँदा या तातो खाँदा जिब्रो पोल्ने गर्दछ । जस..
मुटु सुन्निए यस्तो समस्या आउँछ
मुटु सुन्निने समस्या अधिकांश मुटुरोगीमा देखिने गरेको छ । अन्य रोग लागेजस्तो झुक्याउने लक्षण देखिने यो रोग मुटुको मांसपेशीसम्बन्धी समस्या हो । मुटु सुन्निएर समस्या कस्तो निम्तिन सक्छ ? डा. मिलनप्रकाश श्रेष्ठ भन्छन् : मुटु सुन्निने समस्यालाई मेडिकल भाषामा कार्डियोमायोप्याथी भनेर बुझिन्छ । मुटु सुन्निदा बाहिर ठूलो समस्या तथा लक्षण..
रौतहटमा संचालित स्वास्थ्य शिविरमा सेनापति क्षेत्रीको अवलोकन
गौर, चैत १० – रौतहटमा चलिरहेको बृहत सघन स्वास्थ्य शिविरमा प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले आज अवलोकन गरेका छन् । उक्त क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पाएकोमा सेनापति क्षेत्रीले खुशी व्यक्त गरे । शिविरमा अझै सेवा आवश्यक परे समय थपिने उनले बताए । आज तेस्रो दिन चलिरहेको बृहत स्वास्थ्य शिविर स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहकार्यमा न..
जुन हर्मोनले तपाईंलाई पुरुष बनायो, यसरी गर्नुहोस् त्यसको रेखदेख
चैत १० बीबीसी टेस्टोस्टेरोन एउटा यस्तो हर्मोन हो जुन पुरुषको अण्डकोषमा पैदा हुन्छ । साधारणतया यसलाई पुरुषार्थको रुपमा हेरिन्छ । यो हर्मोनको पुरुषको आक्रमकता, अनुहारमा रौं, मांसपेशी र यौन क्षमतासँग सिधा सम्बन्ध छ । शारिरिक र मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यका लागि यो हर्मोन सबै पुरुषका लागि आवश्यक छ । टेस्टोस्टेरोन हर्मोन उमेरसँगै कम हुनथा..
ध्रुवसागर शर्मा म्याग्दी चैत १० – एघार वर्षदेखि दमका कारण सास्ती खेपेका बेनी नगरपालिका–२ का खड्गबहादुर थापाको स्वास्थ्यमा एकाएक परिवर्तन आएको छ । रोगका कारण घरमै बसेर बित्ने उनको दिनचर्यामा पनि अहिले परिवर्तन आएको छ । उनी निर्धक्क गाउँमा हिँडडुल गरिरहेको भेटिन्छन् । श्वासप्रश्वास प्रणालीमा उत्पन्न समस्याका कारण थलिएकी मङ्गलाघाटक..
काठमाडौँ – मुलुकभरी करिब ३४ हजार क्षयरोगका बिरामी छन् । तीमध्ये काठमाडौँमा मात्र तीन हजार ६०० क्षयरोगी छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनकाअनुसार नेपालमा वार्षिक ४३ हजार व्यक्तिमा क्षयरोग सङ्क्रमण हुने अनुमान छ । राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रममा वार्षिक करिब ३४ हजार बिरामीको निदान तथा उपचार हुने गरेको छ । यो हिसाबले हेर्दा नेपालमा अझ पन..
मोटो शरीर घटाउने हो ? जान्नुहोस्, ६ तरिका
डा. प्रकाशराज रेग्मी, मुटुरोग विशेषज्ञ गुलियोमुक्त परिकार मोटो हुनुहुन्छ र तौल घटाउने योजनामा हुनुहुन्छ भने गुलियोमुक्त परिकार खानुहोस् । गुलिया परिकार र मिठाई नखाँदा मोटोपन घटाउन ठूलो सहयोग मिल्छ । चिनी र चिनीबाट बनेका मिठाइजन्य परिकार गुलियो वर्गमा पर्छन् । कार्बोहाइड्रेडको मात्रा बढी हुने अन्नबाट बनेका परिकार पनि कम उपभोग गर्..
मोटरसाइकल चोरीबाट कसरी जोगाउने ?
विष्णु थापा, ट्राफिक प्रहरी नायब निरीक्षक काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै पछिल्लो १० वर्षमा करिब १२ हजार मोटरसाइकल हराएको निवेदन महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको पीडित सहायता कक्षमा परेको छ । यसरी चोरी भएका सवारीसाधन आपराधिक क्रियाकलापमा प्रयोग हुने सम्भावना बढी हुन्छ । मुलुकी ऐनको चोरीको महल (४) अनुसार धनीको मञ्जुरी नलिई बेइमानीका न..
माइग्रेन हुनेलाई लाभदायक शशांकासन
दीपक नेपाल, योग प्रशिक्षक सामान्यतया टाउको दुखाइ अत्यधिक हुने अवस्थालाई माइग्रेन भएको हो कि भन्ने शंका हुन्छ । यस्तो समस्या नियमित नभई समय–समयमा मात्र हुने गर्छ । टाउकोको आधा भाग मात्र दुख्ने यस्तो पीडा दुई घन्टादेखि ७२ घन्टासम्म हुन सक्छ । टाउकोको एक भाग मात्र दुख्ने हुनाले धेरैले यो समस्यालाई पिनास पनि भन्ने गर्छन् । त्यस्तै, ..
घुम्न निस्कँदा बोक्न नबिर्सौं …
भ्रमणमा निस्कनुअघि के गर्ने के नगर्ने भन्ने सल्लाह धेरैले दिने गर्छन् । तर, निस्कँदै गर्दा साथमा के बोेक्ने भन्ने सल्लाह भने निकै कम मात्र पाइन्छ । पारिवारिक तथा व्यक्तिगत भ्रमणमा निस्कँदा साथमा केही महत्वपूर्ण सामग्री बोक्न बिर्सनु हँुदैन । यस्ता सामग्रीले भ्रमणलाई निकै सहज बनाउँछ । ट्वाइलेटरिज भ्रमणमा निस्कनुपर्दा यस्ता सामग्र..
डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक, मानवअंग प्रत्यारोपण केन्द्र उच्च रक्तचाप, मधुमेह, असन्तुलित खानपान र अव्यवस्थित जीवनशैली मिर्गौलारोग लाग्ने मुख्य कारण हुन् । त्यसैले सन्तुलित जीवनशैली अपनाउनुपर्छ । कम्तीमा वर्षमा एकपटक रगत र पिसाब जाँच गरेर मिर्गौलाको अवस्था बुझिराख्नुपर्छ । खाना खाएलगत्तै सुत्नु राम्रो हुँदैन । खान..
एकाग्रता शक्ति बढाउन यसो गरौँ
मानव शरीरमा प्राणको जति महत्व छ, त्यति नै योगमा त्राटकको छ । सम्पूर्ण योग नै मनका माध्यमबाट गरिन्छ । सोही मनलाई नियन्त्रण गर्ने योगको विधि हो, त्राटक । यसले सम्पूर्ण मन मस्तिष्कलाई पूर्ण सञ्चालित गराई विलक्षण, मेधावी, प्रतिभाशाली साथै शक्तिशाली बनाउँछ । आधुुनिक विज्ञानमा मनोरोग र रोगीको प्रत्यक्ष रूपमा अनुसन्धान, अन्वेषण गरिएको ..
आदर्श प्रधान मनोपरामर्शदाता, होलिस्टिक माइन्ड्स, धापासी तनावले शारीरिक, मानसिक तथा भावानात्मक रूपमा मानिसलाई असर पुर्‍याउँछ । तर, सही तरिकाबाट गरेको उपचार र परामर्शबाट डिप्रेसन पूर्ण रूपमा निको हुन सक्छ । यस्तो समस्या सबै उमेरका व्यक्तिहरूलाई हुन सक्छ । त्यसमध्ये पनि धेरै जसो युवा र महिलाहरू पीडित छन् । त्यसो त बालबालिका तथा प्र..
जान्नुहोस्, हाई ब्लडप्रेसरले निम्त्याउने खतरा नियन्त्रणका उपाय
डा. मिलनप्रकाश श्रेष्ठ, मुटुरोग विशेषज्ञ खतरा हाई ब्लडप्रेसरले आँखा र मिर्गौलामा खराबी ल्याउन भूमिका खेल्छ । मुटु र मस्तिष्कमा असर गरी हृदयाघात र पक्षाघात गराउनेसम्मको खतरा निम्त्याउँछ । ब्लडप्रेसर हाई हुनेलाई गोडा सुन्निने समस्या हुन सक्छ । हाई ब्लडप्रेसरले मुटका मांसपेशी मार्ने, भल्ब बन्द गर्ने, छाती भारी हुने तथा दुख्नेजस्ता ..
कपाल रंग्याउनुअघि नभुल्नुहोस् २ काम
भावना राणा ब्युटिसियन माई फेयर लेडी, धोबीघाट कपालमा रङ वा मेहन्दी लगाउनुभन्दा एक–दुई दिनअघि नुहाउनुहोस् । तर, तत्काल नुहाएर भने रङ नलगाउनुहोस् । धेरै समयदेखि ननुहाएको कपाल पनि नरंग्याउनुहोस् । धेरै फोहोर कपालमा रङ राम्रोसँग बस्दैन भने भर्खर नुहाएको कपालमा रङ लगाउँदा केमिकलले टाउकाको छालामा असर गर्न सक्छ । भर्खर तेल लगाएको कपाल..
घर निर्माण गर्दा सोचेअनुरूप कोठा किन हुँदैन ?
हेमा लामा, बौद्ध फर्निचर जीवनको अति आवश्यक तथा महत्वपूर्ण आवश्यकता हो घर । सबैको चाहना हुन्छ आफ्नो घर सुन्दर, आकर्षक तथा व्यवस्थित होस् । सोही चाहना पूरा गर्न विभिन्न उपाय अपनाउने गरिन्छ । तर, पनि कहिलेकाहीँ विविध कारणले गर्दा घर आफ्नो चाहनाअनुसार बन्दैन । जसले गर्दा खल्लो महसुस पनि हुन्छ । त्यसैले घरको नक्सा बनाउने […]
यदि गर्भवती श्रीमतीलाई रिंगटा र वाकवाकी लाग्छ भने खुसी हुनुहोस्….
धेरैजसो गर्भवती महिलालाई ‘मर्निङ सिकनेस’ को समस्या हुने गर्दछ । एक नयाँ सोधका अनुसार यो समस्या तपाईंको बच्चाको लागि शुभ संकेत हो । जो महिलालाई मर्निङ सिकनेस हुन्छ उनीहरुमा गर्भपतनको जोखिम निकै कम हुन्छ । यो शोध अनुसार गर्भावस्थामा बान्ता होला जस्तो अनुभव हुँदा वा बान्ता आउँदा भ्रुणले सुरक्षा महसुस गर्दछ । यसले भ्रुणलाई टक्सिन [..
शाकाहारीका लागि ८ सर्वश्रष्ठ प्रोटिनका स्रोत
मासु मात्र प्रोटिनको एक मात्र स्रोत हो भन्ने सोच्नुहुन्छ ? तर मासु मात्र प्रोटिनको स्रोत भन्ने कुरा गलत हो । मासुबाहेक पनि यस्ता विभिन्न खानेकुरा छन् जो प्रोटिनका सर्वश्रेष्ठ स्रोत हुन् । मुख्यतः अमिनो एसिडबाट बनेका प्रोटिनले कोशिका र तन्तुको मर्मतका लागि महत्वपूर्ण हुन्छन् । जब शरिरमा प्रोटिनको कमी हुन्छ तब कोशिका र तन्तुका कार..
रक्सीको लत छोड्न नसक्नेले यसरी गर्नुहोस् आफ्नो कलेजोको हेरबिचार
रक्सी पिउने मानिसहरुलाई फोक्सोसम्बन्धि निकै गम्भीर रोग हुनसक्छ । यस्तोमा कलेजोको सुरक्षामा ठूलो प्रश्न खडा हुन सक्छ । आफ्नो खानपिन र जीवनशैलीमा केही परिवर्तन गरेर आफ्नो कलेजोको हेरबिचार गर्न सक्नुहुन्छ । जरा भएको तरकारीः कलेजोलाई स्वस्थ राख्नका लाागि आफ्नो आहारामा जरा भएको तरकारी समावेश गर्नुहोस् । यसमा फ्लेवोनाइड हुन्छ जसले कले..
डा. महेन्द्रबहादुर विष्ट, पूर्वमहानिर्देशक, स्वास्थ्य सेवा विभाग रुघाखोकी ‘नियमित आकस्मिकता’को बिमारी नै हो । कसैलाई यसले धेरै च्याप्छ भने कसैलाई तुलनात्मक कम हुन्छ । रुघा लागेपछि सिँगान बगिरहने, नाक टालिने, सास फेर्न गाह्रो हुने गर्छ । कफ जमेको छ भने छाती गह्रौँ हुने गर्छ, खोकी लागिरहन्छ । खोकी धूम्रपान, दम, धुलो–धुवाँ आदि प्रद..
प्रियंका विक, स्टाफ नर्स, उपक्षेत्रीय अस्पताल, डडेल्धुरा शल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्माउने समय र त्यसपछिको समयमा अत्यधिक रक्तश्राव हुन्छ । अत्यधिक रक्तश्राव व्यवस्थित तरिकाले रोक्ने वातावरण नबन्दा आमाको ज्यानै पनि जान सक्छ । शल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्माउँदा काटेको घाउ पाक्ने खतरा बढी रहन्छ । सरसफाइमा ध्यान दिइएन र घाउ पाक्यो भने किट..